Ugboro abụọ ndi isi Exchangeable Laser ịgbado ọkụ Machine GS-300ST - China Dongguan Glorystar Laser
Ugboro abụọ ndi isi Exchangeable Laser ịgbado ọkụ Machine GS-300ST
Product Introduction ● Specilized na mgbasa ozi, ọkụ ụlọ ọrụ imewe, ihe onwe onye na integrated. ● N'out oge ịgbado ọkụ abụọ nkwonkwo nso, ukwuu melite ịgbado ọkụ arụmọrụ, na iji hụ na izi ezi nke ịgbado ọkụ. ● Abù ịgbado ọkụ, linear ịgbado ọkụ, akpaka ịgbado ọkụ circumferential ịgbado ọkụ, wdg, maka a dịgasị iche iche nke elu kpọmkwem na-agba. ● Elu àgwà welds-eji ire ụtọ na ndị mara mma, nonporous, elu ike mgbe ịgbado ọkụ. ● Okpomọkụ emetụta mpaghara bụ obere, obere deformation, ịgbado ọkụ ...
● Specilized na mgbasa ozi, ọkụ ụlọ ọrụ imewe, ihe onwe onye na ike.
● N'out oge ịgbado ọkụ abụọ nkwonkwo nso, ukwuu melite ịgbado ọkụ arụmọrụ, na iji hụ na izi ezi nke ịgbado ọkụ.
● Abù ịgbado ọkụ, linear ịgbado ọkụ, akpaka ịgbado ọkụ circumferential ịgbado ọkụ, wdg, maka a dịgasị iche iche nke elu kpọmkwem na-agba.
● Elu àgwà welds-eji ire ụtọ na ndị mara mma, nonporous, elu ike mgbe ịgbado ọkụ.
● Okpomọkụ emetụta mpaghara bụ obere, obere deformation, ịgbado ọkụ na-agba.
● Ugbu waveform ike gbanwere, dị ka iche iche na ntọala nke dị iche iche waveforms nke ịgbado ọkụ consumables, ịgbado ọkụ parameters na ịgbado ọkụ chọrọ adịkwa ka imeta ezigbo ịgbado ọkụ na-arụpụta.
● Humanized imewe, LCD ngosi, centralized isi na-eme ka ọrụ mfe.
● Naa Okpomọkụ otụk ebe ,, dịghị deformation mere site ịgbado ọkụ usoro okpomọkụ
● Applicability bụ dum, nwere ike Weld 0,2 mm na 1.0 mm oké ịgbado ọkụ ihe, ma na-welds 3 cm - 120 cm font
● Cost-azọpụta, ịzọpụta oru na ịgbado ọkụ ihe, na consumable eri bụ ihe na-erughị 1/10 nke omenala ịgbado ọkụ usoro.
● Ngwa ihe na ulo oru ngwa
● Adabara mobile ekwentị batrị, sensọ, ọgwụ ngwá, onyinye, nche na clocks, electronic components, sensọ, nkenke ígwè, nkwukọrịta, mgbasa ozi, ebu na ndị ọzọ ọrụ; ọtụtụ-eji igwe anaghị agba nchara, aluminum, ọla kọpa, gold, silver, titanium, alloys, ígwè, diamonds otu ihe ịgbado ọkụ ma ọ bụ ịgbado ọkụ dissimilar ihe.
Max.Laser Power 300W (Nhọrọ)
ịgbado ọkụ usu 0-100Hz
usu Obosara 0.5-20MS
ịgbado ọkụ Omimi 0-2.0mm
Laser Doo Kemeghi nso 0-3.0mm
dum Oriri ≤ 14KW
ike Iwu 380V 50Hz (60Hz) / 220V 50Hz (60Hz)
CNC njikwa System Microcomputer Control
jụrụ System Iche Water Cooling
Idebe System CCD (Nhọrọ)
Mmepụta laser na-elekwasị anya 120mm / 200mm
Previous: Handheld Fiber Nzipu Laser ịgbado ọkụ Machine GS-400-1F
Osote: 3D Dynamic Focus Series Laser akara Machine GLD-100 / GLD-200 / GLD-350
Ugboro abụọ Head Laser ịgbado ọkụ Machine
ọla Laser ịgbado ọkụ Machine
Laser ịgbado ọkụ Machine N'ihi iko
Micro Laser ịgbado ọkụ Machine Price
Laser ịgbado ọkụ Machine N'ihi akpụzi GS-200m